Toy izao ny fijerin'ny Instagram amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Pablo Ortega | | Fampiharana iPhone, Apple Watch, Apple products
Ireo fampiharana dia hanana toerana ambony eo amin'ny Apple Watch, zavatra iray hitanay ny alatsinainy lasa teo nandritra ny fihaonambe Apple. Ny orinasa dia naneho topy maso kely momba ny fomba fiasan'ny fitaovana sasany noforonina ho an'ny famantaranandrony. Ny iray tamin'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny Serivisy fitsangantsanganana Uber, izay hamindra ny fisehoany avy amin'ny iPhone mankany amin'ny efijery kely kokoa amin'ny Apple Watch. Ny tambajotra sosialy Instagram dia hanolotra fomba faran'izay mahaliana amin'ity fotoana ity.
Nihatsara ny fizotran-fotoana nahitana ny sary zarain'ireo mpampiasa arahinay. Toa tena lavorary ilay interface amin'ny efijery lehibe, mampifangaro sary lehibe amin'ireo kely kokoa. Toa mahazatra anao ve io karazana interface io? Ny fampiharana tambajotra sosialy Google Plus dia toa nitovy. Ny fanindriana an'ity sary ity dia ho azontsika fampahalalana bebe kokoa momba izany. Amin'ity fizarana faharoa ity dia notsorina be loatra ny endriny, tapaka kely amin'izay hita eo amin'ny efijery lehibe an'ny fampiharana.
Ity fizarana ity dia mampiseho tahirin-kevitra toy ny famaritana ny sary, ny toerana misy azy ary ny isan'ny "J'aime" ary ny fanehoan-kevitra. Ny fitetezana Instagram dia ho traikefa nahafinaritra miaraka amin'ny fanaraha-maso ny Apple Watch. Ny mpampiasa dia mety ampiasao ny satroboninahitry ny famantaranandro raha hikorisa amin'ny fizotr'andro mampiseho ny sary rehetra, raha manindry ny iray amin'izy ireo ianao dia hahafahanao miditra amin'ny fampahalalana mifandraika amin'izany.
Amin'ity sioka ity, miaraka amin'ny demo natolotry ny Apple ny alatsinainy lasa teo, dia afaka mahita tsara ny Instagram mitady ny Apple Watch:
Apple dia nampiseho ny fahafenoany @instagram fampiharana anio. Demo feno eto: http://t.co/Gh8mYS4WHA pic.twitter.com/hjuwat2z6K
- WatchAware (@WatchAware) March 9, 2015
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Toy izao ny fijerin'ny Instagram amin'ny Apple Watch
Eloisa Elosa Saez dia hoy izy:
Hifanaraka amin'ny ipod touch h 5 ve izany?
Valiny tamin'i Eloisa Elosa Saez
Travis gianetti dia hoy izy:
Fomba iray iriko ny hahitako ny sary amin'ny efijery 3-centimetre fa tsy ny efijery 5-inch izay tsy maintsy ananako eo akaikiny mba hiasa
Valiny tamin'i Travis Gianetti
Manana olana amin'ny Safari aorian'ny fanavaozana ny iOS 8.2? Mora, tsy ianao irery